Ahoana ny fomba hampianarana ny alikako hipetraka | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hampianarana alika hipetraka
Ny fihetsika mipetraka dia zavatra izay, voajanahary amin'ny alika, mora be ny mampiseho azy aminao satria tsy mila manontany azy fotsiny isika ary mampifandray teny iray amin'ilay fihetsika. Zava-dehibe tokoa ny hianaranao azy satria mety hahasoa azy io mandritra ny dia an-tongotra na rehefa misy fitsidihana ao an-trano, ary vao mainka aza raha mikasa ny hisoratra anarana ao amin'ny klioban'ny fanatanjahantena amina.
Raha tsy hainao ny mametraka ny volonao hipetraka isaky ny manontany ianao dia aza manahy. Lazainay aminao ny fomba hampianarana alika hipetraka.
1 Zavatra ilainao
Voalohany indrindra, mora ny manomana izay rehetra ilainao. Tsy dia be loatra izany, fa hanampy be ny alikao hahatsapa:
Fitsaboana alika: tsy maintsy manitra be izy ireo ka manintona azy ireo ilay biby. Izaho manokana dia manoro ireo manana tsiro bacon: tiany izy ireo.
FAHARETANA: Ny alika tsirairay dia samy manana ny gadony ianarany, koa raha hitanao fa mila mianatra kely azy dia aza manahy fa ho tonga tsikelikely any ianao.
tapaka: raha tianao hianarako zavatra dia mila miasa isan'andro ianao. Ny sesiona 2 na 3 minitra intelo na inefatra isan'andro dia tena ilaina mba hahatratrarana ny tanjonao.
fanajana: mihiaka, fihetsehana tampoka na fampijaliana tsy hitondra soa, fa ny alika kosa miafara amin'ny fahatahorana anao.
Tetehina ny fitsaboana raha lehibe izany. Ireo sombin-javatra ireo dia tokony ho kely dia kely fa ny alika dia tsy maintsy mitelina azy ireo (tsy mitsako).
Vita, antsoy ny namanao amin'ny feo falifaly.
ankehitriny, asehoy azy ilay fitsaboana ary arosoy amin'ny orony io (toy ny hoe mila miborosy ianao) hatrany an-damosin'ny lohany. Tehirizo amin'ny haavo ambany izy mba hipetrahany.
Raha tsy mipetraka ianao, atosiho moramora (Ho ampy ny mametraka rantsan-tànana roa amin'ny faritra ambany amin'ny lamosina, eo akaikin'ny rambony, ary manindry kely).
Rehefa avy nipetraka ianao, lazao aminy »mipetraka» na »mipetraka» ary omeo azy ny fitsaboana.
Avereno imbetsaka ireo dingana ireo mandritra ny 2-3 minitra eo ho eo intelo na inefatra isan'andro.
Fa ny alika mianatra mipetraka dia zava-dehibe izany mifidy toerana fiofanana hangina araka izay azo atao, ary aza mampianatra azy any ivelany.
Mampiasà teny iray isaky ny baiko omenao, ary fadio ny miteny ohatra hoe "tsia, mipetraka" sao mahasadaikatra azy ianao. Mila miteny foana ianao hoe 'mipetraka'.
Rehefa mianatra mipetraka ao ambadiky ny baiko ianao, mandehana omeo azy matetika ny fitsaboana.
Omeo ny filaharana amin'ny tontolo samihafa: eny an-dalana, eny amin'ny valan-javaboary, any an-tranon'ny namana ... Tsy maintsy mianatra mipetraka izy isaky ny manontany azy ianao, na aiza na aiza tontolo iainana.
Ka ny volonao dia hianatra hipetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana alika hipetraka
Ohatrinona ny rano tokony hosotroin'ny alika isan'andro